अन्तरकलेज वादविवाद प्रतियोगिता हुने
काठमाडौं । लियो क्लब अफ काठमाडौं मार्गदर्शनले, मार्गदर्शन अन्तरकलेज वादविवाद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ । साउन १ गते हुने प्रतियोगिताले प्लस टु का विद्यार्थीहरुलार्इ समसामयिक बिषयमा थप अध्ययन गर्ने बानीको विकास गराउने र उनीहरुमा भएको क्षमतालाई प्रस्फुटन गराउने कार्यक्रमका संयोजक सरोज बस्नेतले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म सहभागिता नजनाएका प्लस टु कलेजहरुले, जेठ २९ गतेसम्म आफ्नो सहभागिताको निम्ति दर्ता गराउन सक्नेछन् । बस्नेतका अनुसार टिम डिबेटको निम्ति ३ वटा शीर्षकहरु छानिएको छ ।
पहिलो नेपालमा संघियता आवश्यक छ कि छैन ? दोस्रो नेपालमा सौन्दर्य प्रतियोगीतालार्इ बन्देज लगाइनुपर्छ की पर्दैन ? र तेस्रो प्लस टुका विद्यार्थीहरुलार्इ सामाजिक सञ्जाल चलाउन बन्देज गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? रहेका छन् ।
यी सबै शीर्षकहरुबाट आयोजकले एउटा निश्चित उद्देश्य राखेको पनि बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘संघीयतामा त हामी गैसकेका छौ तर पनि यसको आवश्यकताको बिषयमा हामीले फेरि प्रश्न उठाएका छौं। जहाँ, हाम्रो अभिप्राय के छ भने विश्वमा यस्ता धेरै देशहरु छन्, जो संघीयताको गलत प्रयोगबाट तहसनहस भएका छन् । हामी ती देशहरुबाट के पाठ सिक्न सक्छौ भन्ने कुराहरु निकै गहन सङ्ग त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छन् र संघीयताको सही प्रयोग गरेर आज केही बर्षमै काँचुली फेरेका देशहरुको भित्री कथा पनि त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसले हामीलार्इ अर्को सन्देश प्रदान गर्दछ । हामीले यी तिनवटै शीर्षकमा हुने बहसबाट केही परिवर्तनको अपेक्षासहित यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं ।’
जहाँ एक पक्ष, अर्को विपक्ष र फेरि पक्ष, अर्को विपक्ष गरेर टिम डिबेट मोडेलमा हुनेछ । जहाँ पहिलो, द्वितीय र तृतीय हुने टिमलार्इ क्रमश १५,०००, १०,००० र ७,००० नगद, ट्रफी र मेडल, अनी उत्कृष्ट वक्तालार्इ रु ३००० नगदसहित मेडल र ट्रफीसँगै सहभागी सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरुलार्इ प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
कार्यक्रमको लागि टिम दर्ता शुल्क रु २१०० रहेको र अहिलेसम्म करिब १७ वटा कलेजहरुले आफ्नो सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिसकेका छन् । करिब ३५ कलेजहरुको सहभागिता रहनेमा आफूहरु ढुक्क भएको आयोजक संस्थाले बताएको छ ।
लियो क्लब अफ काठमाडौं